नस्ल प्रस्तोता दाना Borisova हालै hotly वेबमा बहस। चर्चा को एक उत्तेजना शाब्दिक इन्स्टाग्राम हरेक फोटो केटी छ। यो हाल telediva मा धेरै परिवर्तन कि अकाट्य र आश्चर्यजनक prettier छ। कति बारेमा यो अपरेसन पौराणिक छन् एकै समयमा सारिने थियो। दाना Borisova अघि र प्लास्टिक पछि यस लेखमा छलफल गरिनेछ।
टिभी प्रस्तोता अक्सर ब्लग मा व्यक्तिगत तस्बिरहरू प्रकाशित। किन धेरै सदस्यहरू तुरुन्तै केटी को उपस्थिति मा परिवर्तन देख्यो छन् भन्ने छ। यो मात्र होइन स्तन वृद्धि भएको छ र धेरै पातलो थियो, तर पहिचान गर्न नसकिने भएको छ। धेरै प्रश्न सोधे: "छ सेलिब्रिटी ठीक निर्णय र अरू सबै कुरा?" Sama दाना Borisova, फोटो यस लेखमा प्रकाशित छन्, जसमा व्यक्ति प्लास्टिक भइरहेको छ भनेर अस्वीकार गरेको छ। त्यो सीमित नियमित (4 पटक एक वर्ष) hyaluronic एसिड को इंजेक्शन अनुहार मा झुर्रियाँ गर्न injects कि बोटक्स र दुई वर्ष मा एक पटक ओठ सच्याउनुहुन्छ तर्क छ। को निधारमा, को गाल र परिपत्र लिफ्ट प्रस्तोता को परिवर्तन बारे कथाहरू पनि गफ र सरासर भ्रम भनिएको छ।
Prettier र postroynevshaya सेलिब्रिटी अब आफ्नो व्यक्तिगत जीवन को विवरण साझेदारी गर्न तयार छ। त्यो बारेमा घमण्ड केही छ। दुई फरक मान्छे हो - र यो किनभने दाना Borisova अघि र प्लास्टिक पछि, अचम्मको छैन। यो बार्बी थकित घरेलू चिन्ता एक महिला, त्यो वर्ष को बस एक जोडी पहिले थियो देखिन्छ गर्म र बेहवा संग एक आकर्षक केटी पाउन गाह्रो छ। अब, सौंदर्य चिकित्सा स्थायी शौक दाना भयो। यो प्लास्टिक निर्भरता फस्न हुनेछ कि धेरै डर। आधुनिक शो व्यापार को इतिहास उदाहरण धेरै थाह छ। को "अर्जेन्टिना र तथ्य" त्यहाँ पनि निर्माताहरू "सिलिकन प्रतीक" कल जो दर्जा एक प्रकारको थियो। वेरा Alentova, Anastasiya Volochkova, अन्ना Semenovich, त्यहाँ थिए Masha Malinovskaya, Lyubov Uspenskaya, र अन्य सेलिब्रेटीहरू। तथापि, टाढा हुँदा दाना Borisova यी सबै महिला बाट। यो उपस्थिति मा परिवर्तन केटी अनुमोदन गए कि पहिचान छ।
यसलाई आधिकारिक telediva पहिचान छ जो मात्र प्लास्टिक सर्जरी छ। शायद किनकी परिणाम पनि स्पष्ट छ। दाना Borisova अघि र पछि प्लास्टिक - एक "दुई-कपडा" (आफ्नै शब्द प्रस्तोता) र बस्ट तेस्रो आकार संग एक शानदार गोरा रूपमा स्तन संग एक महिला। त्यो पूर्ण आफ्नो वर्तमान प्रकारका सन्तुष्ट कि तर्क छ। हामी उसलाई आदर तिर्न पर्छ - त्यो उनको कुनै दोष नभएको आंकडा गर्न व्यवस्थित गर्ने योग्य प्लास्टिक सर्जन, गर्न लागे। आफ्नो सेवा लागत Dane सस्तो छैन। सञ्चालन समयमा त्यो पाँच सय हजार rubles भुक्तानी। प्रत्यारोपण, Borisova सम्मिलित छन् आज भन्दा अहानिकारक छलफल। तर यो अर्को कथन सुंदरियों भरोसा गर्न लायक छ? आखिर, त्यो उनको अनुहार किन लगभग पहिचान गर्न नसकिने थियो सम्म पचास वर्ष पुरानो प्लास्टिक सामना गर्नेछ, तर त्यसपछि दाबी?
टिभी प्रस्तोता हाल सम्म यसको आफ्नै को अपील समर्थन दाबी। त्यो ब्यूटिशियन क्रीम किनेको र नियमित लगाएको उपस्थित विरोधी-वृद्ध मास्क। प्रयास hyaluronic एसिड इंजेक्शन सल्लाह केटी आमा। त्यो यस्तो प्रक्रिया आनन्द र एकदम परिणाम खुसी बसे। Hayk Babayan (प्लास्टिक सर्जन) "सौन्दर्य शट" सर्जरी संग गर्न केही छ कि उनको विश्वस्त गर्न सक्षम थियो। दाना Borisova स्तन प्लास्टिक पछि पूर्ण यो डाक्टर उनको कुनै दोष नभएको फारम बनाउन सक्षम थियो किनभने, उसलाई विश्वास गर्छु। पहिलो प्रक्रिया telediva समयमा म सबै समय कराए र frowned, तर दुखाइ भन्दा डर को अधिक। डाक्टर केही दिन मा धेरै सुन्दर र साना दाना Borisova उठाउनका लागि भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। सेलिब्रेटीहरू फोटो हामी यसलाई देखाउन।
व्यक्ति प्रस्तोता मात्र rejuvenated छैन भनेर धेरै सूचना। यस बालिका केही सुविधाहरू ठूलो सौन्दर्य र अनुग्रह प्राप्त गरेको छ। दाना Borisova प्लास्टिक अघि र पछि परिवर्तन भएको छ कसरी बहस, यो उनको ओठ धेरै आकार बढेको थियो, र नाक धेरै पतली र prettier बन्न उल्लेख गर्न सकिन्छ। तर telediva vehemently rhinoplasty गरे इनकार। उनले सौंदर्य चिकित्सा सधैं ठूलो सावधानीपूर्वक र आपतकालीन को मामला मा सेवाहरूमा कोरिएको भन्छन्। तथ्यलाई केटी नियमित आफ्नो ओठ inflates कि, हामी पहिले नै थाहा छ। उपस्थिति मा अन्य परिवर्तनहरू मा, त्यो मौन छ। प्लास्टिक एक जस्तो पछि केही द्घेष आलोचकहरु दाना Borisova तर्क बरतन पुतली सिद्ध र भावविहीन अनुहार। तैपनि, संयमता - आफ्नो अनुहार र आंकडा को सुधार हरेक महिला मार्गदर्शन गर्नुपर्छ भनेर आधारभूत नियम।
एउटा तरिका वा अर्को, तर प्रस्तोता लोकप्रियता चाँडै बन्द गरे। त्यो पहिलो च्यानल मा दर्जा शो "टावर" सञ्चालन गर्न निमन्त्रणा गरिएको थियो। त्यो फेरि लोकप्रिय प्रकाशनहरू पृष्ठ देखि धमकना थिएन। फेरि "स्टार" रेल-ज्ञात टिभी उपस्थापक दाना Borisova प्रविष्ट गर्नुभयो। प्लास्टिक, पक्कै यो एक निर्णायक भूमिका खेलेका।
अभिनेताहरु, विचार को भूमिका: "मान्छे को दास"। शिक्षक राष्ट्रपति भयो कसरी को कथा
रसेल ब्रान्ड: एक जीवनी, चलचित्रहरू मा क्यारियर र टिभी, व्यक्तिगत जीवन
जीवनी Alena Khmelnytsky - सफल रूसी फिलिम अभिनेत्री
दबाब के तयारी लिएको हुनुपर्छ
"ब्योर्न" - रेस्टुरेन्ट (मास्को): विवरण, फोटो र समीक्षा
कानुनी जागरूकता र कानुनी संस्कृति, आफ्नो सम्बन्ध र संयन्त्र विकास
खट्टा क्रीम मा तला आक्षेप: नुस्खा
को प्वाल मा 'Rinofluimutsil'
Duopoly - यो ... Cournot, Stackelberg, Bertrand